संकटमा पानी बिरालो, संरक्षणको चासो छैन पानी बिरालो मध्यम आकारको, खुट्टा छोटो र शरीर ठूलो भएको जनावर हो। औसत तौल ५–१६ किलोग्राम हुन्छ भने शरीरको लम्बाइ ५७–७८ सेन्टिमिटर तथा पुच्छर २०–३० सेन्टिमिटर हुन्छ। यसको भुत्ला पानी प्रतिरोधी हुने हुँदा पानीमा पनि शिकार गर्न सक्छ। त्यसैले यो अरु प्रजातिका बिरालो भन्दा फरक तथा विशिष्ट छ।
विद्यालयको पाठ्यक्रममै किन समावेश नगर्ने यौनहिंसा विरुद्धको शिक्षा ? पूर्व प्राथमिक तहका पाठ्यक्रमदेखि नै यौनहिंसालाई निरुत्साहित गर्ने पाठ्यसामग्री समावेश गर्न जरुरी छ। जसले लैङ्गिक विभेद हटाइ समभाव पैदा गर्छ। बालापनमा बालअधिकारका आधारभूत अधिकार उपभोग गर्न पाएकाहरुले मात्र अरुको अधिकारको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्छन्।
अब म पीसीआर टेस्ट गर्दिनँ लक्षण देखिएपछि कतै कोरोना संक्रमण भयो कि भनेर पीसीआर जाँच गर्न जाँदा यति धेरै सास्ती व्यहोर्नुपर्छ कि अर्कोपल्ट परीक्षणका लागि जाने आँट नै आउँदैन।
वुहानबाट काठमाडौंलाई चिठी वुहानमा बसिरहनु सामान्य निर्णय थियो। मानवीय सहायताको क्षेत्रमा काम गरिरहेकी म यस्तो उच्चस्तरको सङ्कट देखापरिरहँदा मैले छोड्ने कुरा भएन।
‘आलु आन्दोलन’ ताकाको त्यो भीमफेदी–कुलेखानी २००९ सालमा मकवानपुरको भीमफेदीबाट आलु निकासी गर्दा सरकारले दुई ठाउँमा भन्सार महशुल लिएको विरुद्ध जागेको आन्दोलन चर्काउन हामी विद्यार्थी नेताका रूपमा पुगेका थियौं।
पहिलो पटक छोएको त्यो हिउँ चितुवा हिउँ चितुवाको अगाडिको खुट्टा हामीले थापेको पासोमा परेको थियो। अतालिएको अवस्थामा धुपीको बुट्यान वरिपरि फन्को लाइरहेको थियो।
यस्तो रहेछ किरातदेखि राणा कालसम्मको शासन-प्रशासन लिच्छविकालमा राज्यलाई विभिन्न प्रान्तमा विभाजन गरिएको रहेछ। प्रान्त प्रमुखलाई ‘सामन्त’ भनिन्थ्यो, जसको नियुक्ति राजाले गर्ने परिपाटी रहेछ।
जुध्दशमशेरको किस्सा र शिकार शिविर राणा शासकहरूले अंग्रेजहरूलाई शिकार खेल्न तराईका जंगलमा आमन्त्रण गर्ने र उतैबाट बिदा गर्ने, काठमाडौं प्रवेश नगराउने रणनीति अपनाएका रहेछन्।
भूत आउँथ्यो, धुमधाम तर्साउँथ्यो मेरी बुढीसासू (सासूको सासू) चन्द्रकुमारी जोशीको उमेरले १०६ टेकिसकेको छ। विस्मृतिले च्याप्दै गए पनि, हामीले कोट्याउँदा अड्की अड्की पुराना कुरा गर्नुहुन्छ। यसपालिको अंश मुवाको माइती, ढोकाटोलको घर, चोक र ‘आवासीय’ भूतहरूबारे, वहाँकै शब्दमाः
यसरी गरौं बालबालिकामा पठन संस्कृतिको विकास बालबालिकालाई सर्वप्रथम शिक्षकले नै अतिरिक्त पुस्तक पढ्न प्रेरित गर्नुपर्छ। तर, आफ्नै स्कूले जीवनमा अतिरिक्त पुस्तक पढ्न नपाएका बहुसंख्यक शिक्षक आफ्ना विद्यार्थीले त्यसो गरे पढाइमा बाधा पर्ने ठान्छन्। यस्तै बुझाइ अधिकांश अभिभावकहरुमा पनि छ।
के थारु अशुध्द उच्चारण गर्ने जाति हो ? मुनि थोप्ला राखिने वर्ण ‘ड’ र ‘ढ’ को उच्चारण थारु भाषामा ‘र’ हुन्छ। नेपाली भाषामा अभ्यस्त भएका र रमाएकाले मात्र ‘ड’ र ‘ढ’ नै उच्चारण गर्छन्। थारु जिब्रोले ‘सडक’लाई ‘सरक’ भन्छ। त्यसैले संस्कृत भाषा मूल भएकाहरुले थारुहरुलाई ‘अशुद्ध उच्चारण गर्ने जाति’ भन्छन्।
खोइ बालबालिकाको झूट, छल र कपट विरुध्द अधिकार ? अनेकौँ बहानामा हामी हाम्रा बालबालिकासँग यति धेरै झूट बोल्छौँ कि उनीहरु झूट सुन्न अभ्यस्त हुँदै जान्छन्। विडम्बना, आजसम्म हामीले बालबालिकामाथि हुने ढाँट, छल र कपट विरुद्धको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेका रहेनछौँ।
आलुको कथा र हर्क गुरुङले बुझेको ताप्लेजुङ बेलायतका वनस्पति विज्ञ जोसेफ डाल्टन हुकर मार्फत नेपालमा सबैभन्दा पहिले ताप्लेजुङमा आलु भित्रिएको रहेछ।
स्वास्थ्य समस्या नै नभएका अरविन्दको अनुभव- ‘मृत्युको मुखबाट मुश्किलले फर्किएँ, कोरोनालाई हल्का नठानौं’ कोरोनाभाइरस संक्रमणपछि स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर बनेर आईसीयूमा उपचार गराउनुपरेका वीरगञ्ज निवासी शिक्षक तथा सामाजिक अभियन्ता अरविन्द सिंह अन्तत: संक्रमणमुक्त भएर घर फर्किए। संक्रमित भएपछिको भोगाइ र अस्पताल बस्दाको उनको अनुभव:
नेकपा सचिवालय बैठक आज, ओली र दाहालको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय सचिवालय बैठक आज बस्दैछ। बैठक दिउँसो १ बजे नेकपा मुख्यालय धुम्बाराहीमा बस्नेछ।